/ब्लग/ग्यालरी/SARM SR9009 शरीर सौष्ठव को लागी एक पूरा खरीद गाईड
प्रकाशित 10 / 14 / 2019 by 阿斯劳 मा लेखियो ग्यालरी.
1.What हो SR9009?
SR9009 वा स्टेनाबोलिक क्यास 1379686-29-9 पूरक हो जुन कार्डियो व्यायामको प्रभावहरूको नक्कल गर्दछ। न केवल औषधिले तपाईंलाई तपाईंको केही अतिरिक्त शरीरमा बोसो फ्याँक्न पनि मद्दत गर्दछ, तर यसले तपाईंको सहनशक्तिलाई बढावा दिनेछ जबकि धैर्यतालाई बृद्धि गर्दछ।
SR9009 एक सिंथेटिक यौगिक हो, जुन प्रोफेसर थॉमस बुरिसको बुद्धिले अस्तित्वमा आएको हो। यो नजिकबाट सम्बन्धित छ SARMS (सेलेक्टेड एन्ड्रोजन रिसेप्टर मोड्यूलेटरहरू), तर यो कंकाल मांसपेशी, एडिपोज टिश्यू, मस्तिष्क, र कलेजोमा फेला पर्ने रेभ-एर्ब प्रोटीनको लागि एगोइस्टिक छ।
प्रोफेसर बुरिस साथ आए SR9009 (1379686-29-9), सर्काडियन तालको अध्ययन र बुझ्ने इच्छा राख्दछ।
2.Hr कसरी SR9009 काम गर्दछ?
के तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईंले ट्रेडमिलमा 2km चलाउन वा केही हेवीवेटहरू उठाउँदा महसुस गर्नुहुन्छ? ठीक छ, SR9009 वजन घटाने औषधि तपाईंलाई पनि त्यस्तै महसुस गराउनेछ। पूरकको सर्काडेन मोड्यूलेसन, लिपिड रेगुलेसन, र ग्लुकोज स्तर नियन्त्रणमा भूमिका छ।
SR9009 SARM रेभ-अर्बको उत्तेजनामा ​​महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यस प्रोटीनले शरीरको अत्यधिक बोसो, चिनी, र खराब कोलेस्ट्रोल जलाउन क्षमतालाई असर गर्छ। यसैले, यसले धीरज सुधार गर्ने क्रममा तौल घटाउने प्रक्रिया बढाउछ। यदि तपाईं व्यायाम गरिरहनु भएको थियो भने पनि, तपाईं ऊर्जावान र कम थकान महसुस गर्नुहुन्छ जुन तपाईं थप शारीरिक प्रशिक्षण गर्न सक्नुहुनेछ।
स्टेनाबोलिकले फ्याट, लिपिड र शर्करालाई मेटाबोलिज गर्दछ। जब शरीरको ईन्धन खपत अधिकतम हुन्छ, तब तपाईं पक्कै पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन प्राप्त गर्नुहुनेछ। मूरिन मोडेलहरू प्रयोग गरीरहेको एक अध्ययनमा, मुसाहरू जुन मुनिका मुनि थिए SR9009 पाउडर (1379686-30-2) खुराक पहिले भन्दा दुई पटक छिटो चल्न सक्छ। प्रमाणको यो टुक्रा एथेलेटिक्समा प्रतिबन्धित औषधीहरूको बीचमा स्टेनाबोलिक सूचीबद्ध भएको कारण हुन सक्छ।
यदि तपाईं कसरत पागल हुनुहुन्न भने, यो समाचार भनेको सुन्ने कान छन्। तपाई आराम गरिरहनु भएको बेला स्ट्यानाबोलिकले तपाईको मेटाबोलिक दरलाई पनि दुगुना गर्दछ। खाना खाए पछि, तपाईंको शरीरले सामान्यतया खानालाई फ्याटमा रूपान्तरण गर्दछ। जे होस्, SR9009 वजन घटाउने पूरक तत्काल मेटाबोलिजमलाई बढावा दिन्छ कि तपाईं तुरुन्तै यो फ्याट बर्न सुरु गर्नुहुनेछ।
भर्खरका अध्ययनहरूले देखाए कि स्टेनाबोलिक एक एन्टी-क्यान्सर एजेन्ट हो। SR9009 क्यान्सर विरोधी PIK3CA, HRAS, र BRAF सहित oncogenic चालकहरु लाई प्रभावित गर्दछ। घातक कोशिकामा, उत्पादन apoptosis प्रेरित र प्रतिकूल प्रभाव पैदा नगरी ट्यूमर विकास बाधा।
3। कसरी SR9009 प्रयोग गर्ने
SR9009 मांसपेशी लाभको बन्द लेबलको प्रयोग बाहेक ड्रग, पूरकको महत्वपूर्ण औषधीय मानहरू छन्। चिकित्सकहरूले अत्यधिक मधुमेह बिरामीहरू र स्ट्रोकको सिकार हुनेहरूका लागि सिफारिस गर्दछन्।
यदि तपाईं आफ्नो रोगको प्रबन्ध गर्न SR9009 पाउडर (1379686-30-2) प्रशासन गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, पहिले आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्न निश्चित गर्नुहोस्। औषधि सुरक्षित छ, तर तपाईंको चिकित्सकले कुनै प्रतिकूल लक्षणहरूको निगरानी गर्दा हालको औषधि सम्बन्धी तपाईंलाई सल्लाह दिनुपर्दछ।
अफ लेबल प्रयोगको लागि, एक विशिष्ट SR9009 खुराक लगभग 30mg / दिन हो। खुराक तीन भागमा विभाजित छ।
यदि तपाईं धैर्यताको पछि हुनुहुन्छ भने, तपाईंले जिममा हिर्काउन भन्दा पहिले पूरक लिनु पर्छ। कारण यो छ कि SR9009 छोटो आधा जीवन छ; तसर्थ, प्रभावहरू फ्ल्यासमा देखिन्छ। आदर्श रूपमा, यसलाई खानाको अघि व्यवस्थापन गर्नुहोस् ता कि तपाईं दिनभर कुशल चयापचय कायम राख्न सक्नुहुन्छ।
4। SR9009 का लाभहरू, तपाइँ के आशा गर्नुहुन्छ?
वजन घटाउने प्रचार गर्नुहोस्
SR9009 SARM चयापचय प्रक्रिया सुधार गर्दछ। एक पटक इन्जेसन भयो भने, स्टेनाबोलिकले शरीरलाई अतिरिक्त क्यालोरीहरू जलाउनको लागि वसामा बदल्नुको निम्ति प्रोग्राम गर्थ्यो। न केवल पूरकले फ्याट भण्डारण गर्ने जीनलाई मध्यम गर्दछ, तर यसले कलेजोमा नयाँ फ्याट सेलहरूको उत्पादन घटाउँछ।
यदि तपाइँको लक्ष्य शरीरको वजन कम गर्न को लागी हो भने, तपाइँको तालिकामा शारीरिक गतिविधिहरू समावेश गर्न निश्चित गर्नुहोस्। बाहिर काम गर्दै, डाइटिंग गर्दै, र SR9009 पूर्व कसरत अनुपूरक लिँदा अतिरिक्त फ्याटको जलगमन गर्दछ। अनुसन्धानले संकेत गर्दछ कि स्टेनाबोलिकको प्रयोगले फॅटी एसिड र प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड्स एकाग्रता क्रमशः 23% र 12% कम गर्दछ।
मोटो अवस्थामा जहाँ काम गर्ने वा डाइटिंग अब एक विकल्प हुँदैन, डाक्टरहरूले सम्भवतः यो पूरक सल्लाह दिन्छन्।
ग्राहक समीक्षा मार्फत योजना बनाउँदै, एक प्रयोगकर्ताले पुष्टि गरे कि SR9009 पाउडर (1379686-30-2) तीन महीनामा मा उनको 17 पाउन्ड ड्रप गर्न मद्दत गर्‍यो।
यस परिशिष्टले मांसपेशीहरूको मात्रा बढाउँदैन तर यसको शक्ति र प्रदर्शनमा सुधार गर्दछ। एसआर 9009०० dos डोज प्रशासित गरेपछि प्राप्त हुने भावना भारोत्तोलनको बराबर हो।
औषधि मांसपेशी कोशिका भित्र माइटोकन्ड्रिया को एक विशाल उत्पादन को उत्तेजित गर्दछ, यसैले चयापचय heighting। यी Organelles मांसपेशीय ऊतकों मा ऊर्जा उत्पादन को लागी जिम्मेदार छन्। यसका साथै मांसपेशिहरुमा ग्लुकोजको प्रयोग र फ्याटी एसिड खपतमा बृद्धि हुनेछ।
क्लिनिक रूपमा, SR9009 ले मांसपेशियों को गिरावट वा सारकोपेनियाबाट पीडित बुजुर्गहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछ।
अधिकांश जिमनास्टहरूले आफ्नो शरीर सौष्ठव प्रणालीमा SR9009 मांसपेशी लाभ औषधि समावेश गर्न मिल्दैन। तपाईं तौल लिनुहुन्छ, ट्रेडमिल चलाउनुहुन्छ, वा जुनसुकै व्यायाम पनि थाक्छ वा हल्का टाउको महसुस नगरीकन।
पूरकले निस्सन्देह तपाइँको प्रदर्शन यो पहिले भन्दा एक निशान उच्च ले हुनेछ। यदि तपाईंले सोच्नुभयो कि यी SR9009 लाभहरू एक घोटाला हो भने, तपाईंले सायद यो प्रश्न सोध्नु पर्छ कि किन एन्टि डोपिंग एजेन्सीले प्रतिस्पर्धात्मक खेलहरूमा यसको प्रयोग दृढतापूर्वक प्रतिबन्धित गर्दछ।
थर्मस बुरिस, संस्थापक, स्टैनाबोलिकले भनेजस्तै औषधिले तपाईंलाई जादू गरी एस्लीटमा परिवर्तन गर्दछ। गहन अभ्यास गर्दा पनि तपाईं ऊर्जा वा सहनशक्ति चलाउन सक्नुहुन्न।
यदि तपाईं दिनभर सँधै निराश हुनुहुन्छ भने, स्टेनाबोलिक तपाईंको अर्को उपचार हुन सक्छ। एक निश्चित अनुसन्धानमा, पूरकले मूरिन मोडेलहरूको निद्रा बान्की परिवर्तन गरेको देखिन्थ्यो। वैज्ञानिकहरूले टिप्पणी गरे कि यी चूहोंहरू दिनमा बढी सचेत थिए, र ती मध्ये कुनै पनि गहिरो निद्रामा जान सकेन। त्यसो भए, यदि तपाईं आफ्नो सुताई बान्की बदल्नको लागि तपाईंको सर्कडियन तालमा ह्याक गर्न चाहनुहुन्छ भने, SR9009 खुशीसाथ गर्नेछ।
छोटो SR9009 आधा जीवन को लागी धन्यवाद, जागृति प्रभाव अल्पकालिन हुनेछ। तसर्थ, तपाईं पूरै दिनको लागि निद्रानाश हुनुहुने छैन।
ऊतक क्षति (फाइब्रोसिस)
अनुसन्धानले पुष्टि गर्दछ कि कलेजो फाइब्रोसिसको साथ चूहोंले दुई हप्ताको लागि SR9009 लिइसके पछि पूर्ण रूपले निको भयो।
हृदय रोगबाट बचाउँछ
यस्तो अवस्थामा जहाँ मुटु असामान्य रूपमा विस्तार गर्दछ, SR9009 पाउडर (1379686-30-2) कार्य गर्दछ अंगको आकार र तौल घटाएर विसंगतिलाई उल्टाउन। जब कडा धमनीको साथमा चूहोंलाई स्टेनाबोलिकको उपचार गरिएको थियो, अनुसन्धानकर्ताहरूले सात हप्ता पछि रक्त वाहिका घावहरूको आकारमा भएको कमी देखेका थिए।
केही प्रयोगकर्ताहरू स्वीकार गर्दछन् कि पूरकले उनीहरूको रक्तचाप कम गर्नमा केन्द्रीय भूमिका खेल्दछ।
रक्त कोलेस्ट्रॉल कम गर्दछ
यदि तपाईं मोटोपनमा हुनुहुन्छ भने, तपाईंको कोलेस्ट्रोलको मात्रा उच्च हुने सम्भावना हुन्छ। SR9009 ले 47% लाई LDL काट्छ, यसैले तपाईंको workouts लाई अधिक उत्पादक बनाउँदछ। तपाईंले नोट गर्नु पर्दछ कि पूरकले एचडीएल स्तरलाई असर गर्दैन।
कम हुँदैछ दाह
रेव-एर्बले सीएनएस भित्र सूजन र चोट नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। SR9009 ले Rev-Erbα आणविक रिसेप्टर्सहरूलाई उत्तेजित गर्दछ, जसमा एन्टी-इन्फ्लेमेटरी प्रभावहरू छन्।
औषधिले CML2, MMP-9, र TNF-as जस्ता ज्वलनशील अणुहरूको उत्पादनलाई दबाउँछ। टिश्यु क्षति र पुरानो सूजन ओन्कोजेनिक कारक हुनाले वैज्ञानिकहरूले ओन्कोजिन-प्रेरित सनसेंसमा एसआरएक्सएनयूएमएक्स क्यान्सर विरोधीको सम्भावनाहरूको अध्ययन गरिरहेका छन्।
चिन्ता कम गर्दछ
SR9009 चूहों मोडेलहरूमा चिन्ता कम गर्दछ।
कुनै ईन्जेक्सन छैन
यदि तपाईं ट्रिपानोफोबिया हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ तपाईंको लागि केही राम्रो समाचार छ। ठीक छ, SR9009 मौखिक प्रशासनको लागि उपलब्ध छ। कुनै अधिक दर्दनाक ईन्जेक्सनहरू छैनन्, जसरी प्राय जसो फ्याट-जलाउने औषधिहरू छन्।
5.Half SR9009 को जीवन
SR9009 आधा जीवन चार घण्टा भन्दा छोटो छ। यस कारणका लागि, तपाईंले रक्तचापमा औषधिको जैविक उपलब्धता स्थिर गर्न चार घण्टाको अन्तरालमा तपाईंको खुराक विभाजित गर्नुपर्दछ।
6.SR9009 खुराक र साइकलिंग
SR9009 खुराक केहि कारकहरु मा hinges। त्यो हो, के तपाईं प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ र के तपाईं आफ्नो चक्रमा अन्य पूरकहरू सम्मिलित गर्दै हुनुहुन्छ। यसका साथै, पर्चेको रकम पनि तपाईंको शरीर कसरी प्रतिक्रिया गर्दछ भन्ने विषय हो।
औसत खुराक प्रति दिन 30mg हो, जुन तपाईं तीन अलग खुराकमा विभाजन गर्न सक्नुहुन्छ। शाब्दिक रूपमा, यो प्रिस्क्रिप्शनको मतलब यो छ कि तपाईले तीनवटा स्क्वायर भोजन लिनु अघि तपाईको गोली चलाउनु पर्छ। यसको सट्टामा, तपाईं प्रत्येक चार घण्टा पछि पूरक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
धेरै जसो समय, SR9009 पाउडर (1379686-30-2) पूर्व वर्कआउट खुराक स्पेसिंग पर्याप्त व्याकुल हुन सक्छ, विशेष गरी अधीर प्रयोगकर्ताहरूको लागि। को हुन सक्छ चार घण्टाको अन्तरालमा कुनै औषधि लिन सक्छ गडबड नगरी? त्यसोभए, यदि तपाईं यो डजिंग तालिकाको साथ सहज हुनुहुन्न भने, तपाईं यसलाई शारीरिक गतिविधि सुरु गर्नु अघि एक घण्टा प्रयोग गर्न संकल्प गर्न सक्नुहुन्छ।
एक SR9009 चक्र आठ देखि बाह्र हप्ता बीचमा चल्छ। त्यहाँ ड्रगलाई सहिष्णु हुने सम्भावनाहरू छन्, त्यसैले यो 8- हप्ता छुट लिनको लागि आदर्श हो।
यस औषधिले कलेजो वा मिर्गौलालाई असर गर्दैन। जे होस्, तपाईले यी अंगहरूलाई रक्षा गर्न सक्नुहुनेछ अन्य महत्त्वपूर्ण सुरक्षात्मक पूरकहरू जस्तै N2Guard लाई तपाईंको SR9009 चक्रमा समावेश गरेर।
7.Do के तपाईंलाई SR9009 का लागि PCT चाहिन्छ?
अन्य पूरकहरूको विपरीत, स्टेनाबोलिक आवश्यक पर्दैन पीसीटी (पोष्ट साइकल थेरपी) को लागी औषधि को स्तर मा हस्तक्षेप गर्दैन टेस्टोस्टेरोन.
8. सम्भावित प्रतिकूल साइड इफेक्ट र SR9009 उपयोगको जोखिम
माथिका लक्षणहरूले प्रायः शुरुआतीहरूलाई असर गर्ने छ। एकचोटि तपाईंको शरीर पूरकमा अनुकूलित हुन्छ, लक्षणहरू हराउँछन्। जे होस्, यदि SR9009 साइड इफेक्टहरू अधिक प्रतिकूल बन्न, तपाईं यो बन्द र आफ्नो चिकित्सक संग कुरा गर्नु पर्छ।
SR9009 कम कामवासना वा इरेक्टाइल डिसफंक्शनका साथ पुरुषहरूको अवस्था बिगार्न सम्भावना छ। कहिलेकाँही, पूरक कम टेस्टोस्टेरोनको स्तरमा जान्छ।
स्टेनाबोलिक होईन स्टेरॉयड। तसर्थ, यो लिँदा हार्मोनल प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्दैन। तपाईंको टेस्टोस्टेरोनको स्तर ड्रप हुँदैन, र न त औषधि एस्ट्रोजेनमा सुगन्धित हुनेछ। महिलाको लागि, पूरकले एक असामान्य मासिक चक्रमा परिणाम दिँदैन।
9.Sacx SR9009 अन्य SARM को साथ
SR9009 बनाम Ostarine
यसका साथ SR9009 स्ट्याकिंग गर्दै Ostarine (MK-2866) विशेष गरी recomping चरणको लागि, असाधारण परिणामहरू प्राप्त गर्दछ।
Ostarine, यसको आफ्नैमा, दुबै भारी र कटौती चक्रहरूको लागि उत्कृष्ट SARM हो। जे होस्, यदि तपाईं अधिकतम धैर्य चाहानुहुन्छ, तपाईंले यसलाई SR9009 को साथ क्लब गर्नुपर्दछ। स्ट्याकमा हुँदा, दैनिक ostarine को 25mg प्रयोग गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्। स्टेनाबोलिकका लागि, 10mg ले काम गर्दछ, तर तपाईंले लिनुपर्नेछ जब तपाईं फिटनेस सेन्टरमा थिच्दै हुनुहुन्छ।
SR9009 बनाम GW 501516
SR9009 र GW501516 (Cardarine) निकट समानताहरू छन्। केही अध्ययनहरूले तर्क गर्दछ कि यी दुई यौगिकहरू समान रिसेप्टर्सहरूमा बाँधिएका छन्।
तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ, स्टेन्याबोलिकको छिटो आधा जीवन हुन्छ, जुन तपाईं एक पूरै दिन चल्दैन। यसको विपरित, कार्डारीनको जैवउपलब्धता २ 24 घण्टा सम्म हुन्छ। यी दुईको संयोजनले 24/7 प्रभावमा परिणाम दिनेछ।
यदि तपाईं GW9009 सँगसँगै SR501516 प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले पूर्वलाई एक कसरत पूरकको रूपमा विचार गर्नुपर्छ। यसको मतलब, तपाईंले दिनहरू काम गरिरहनु भएको दिनमा मात्र स्टिन्याबोलिक प्रशासित गर्नु पर्छ।
जब SR9009 स्ट्याकमा, खुराक मात्र १०mg हो, जुन तपाईंले काम गर्नु अघि चाँडै लिनुपर्दछ। GW10 को लागि, आदर्श नुस्खा २०mg / दिन हो, जसमध्ये तपाईं आफ्नो खाजामा प्रशासन गर्नुहुन्छ।
एसआरएक्सएनयूएमएक्स बिक्रीको लागि मुख्यतया शरीर सौष्ठवहरूलाई लक्षित गर्दछ जो धीरज पछि, शारीरिक प्रदर्शनमा वृद्धि, काम गरेर छिटो पुन: प्राप्ति र दुबला मांसपेशिहरूको निर्माण कार्यमा छन्।
बिभिन्न अनलाइन समीक्षाहरूबाट प्रयोगकर्ताहरूले रिपोर्ट गरे कि पूरकले धीरजमा सुधार ल्याएको छ किनकि उनीहरू थकान महसुस नगरी तीव्र अभ्यास गर्न सक्दछन्। केहीको लागि, सहनशक्ति र ऊर्जाको बृद्धिमा वृद्धि SR9009 पाउडर प्रशासन गरेको लगत्तै उच्च स्तरमा थियो (1379686-30-2).
नकारात्मक पक्षमा, केहि प्रयोगकर्ताहरूले हरेक चार घण्टा लगातार खुराक पेट गर्न सक्दैनन्। जहाँसम्म, SR9009 स्ट्याक्स प्रयोग गर्नेहरूले यो कष्टप्रद हुन सकेनन् किनभने उनीहरूले जिमको लागि जाँदा पूरक मात्र लिनुपर्‍यो।
केही उपभोक्ताहरूले स्वीकार गरे कि स्टेनाबोलिकले उनीहरूलाई धेरै महसुस गराउन सकेन। अनिद्रा बाहेक, कोहीले प्रतिकूल SR9009 साइड इफेक्टहरू दर्ता गर्न सकेन।
11.Is SR9009 जैवउपलब्ध छ?
यस्तो अनुमान लगाइएको छ कि SR9009 को शून्य जैव उपलब्धता छ, विशेष गरी मौखिक प्रशासनमा। जे होस्, म विश्वस्तताले यसलाई खण्डन गर्न सक्दछ किनकि यदि पूरक जैवउपलब्ध थिएन भने, तब त्यहाँ मानव शरीरमा कुनै सकारात्मक SR9009 परिणाम हुन सक्दैन।
12.When SR9009 खरीद गर्न
असंख्य व्यापारीहरूले बिक्रीको लागि SR9009 राख्दैछन्। यद्यपि अनलाइन स्टोरहरू पूरक खरीद गर्नको लागि आदर्श स्थान हो, तपाईं नक्कली उत्पादनहरूका शिकार नहुनु धेरै सावधान हुनुपर्छ।
यदि तपाईं मानव-ग्रेड स्टेनाबोलिक चाहनुहुन्छ भने, यसलाई सम्मानित आपूर्तिकर्ताबाट खोज्नुहोस्। तपाईं संग अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ AASraw.
13.SR9009 बॉडीबिल्डिंगका लागि
SR9009 पाउडर (1379686-30-2) बॉडीबिल्डिंग उद्योगमा छिर्नुभयो जब अनुसन्धानले पुष्टि गर्‍यो कि पूरकले चूहों दुबै मांसपेशीहरू बनायो। यस बाहेक, तिनीहरू एकदम सक्रिय थिए, उत्कृष्ट शारीरिक प्रदर्शन प्रदर्शन गरे, र उनीहरू पहिले भन्दा बढी आक्रामक थिए।
शरीर निर्माणकर्ताहरू जो बल्किंग वा काट्ने पछि छन् पूर्ण रूपमा SR9009 बाट लाभान्वित हुनेछन्। तपाईंले कडा प्रशिक्षण लिनु पर्ने अवस्थाहरूमा, औषधिले तपाईंको अधिकतम मुटुको दर बढाउँदछ, जसले गर्दा लाइटहेडनेस र थकान सीमित हुन्छ। यसका अतिरिक्त, SR9009 शरीर सौष्ठव पूरकले टिश्युहरूमा सूजन र क्षतिलाई कम गर्दछ ताकि पुन: प्राप्ति प्रक्रिया सकेसम्म चाँडो होस्।
SR9009 शरीर सौष्ठव पूरक प्रदर्शन वृद्धि को लागी काम गर्दछ। कम से कम, यस तथ्यलाई र ब्याक अप उत्पादको अनगिन्ति सकारात्मक प्रयोगकर्ता समीक्षालाई ब्याक अप गर्न पर्याप्त पूर्तिपूर्व परीक्षणहरू छन्।
यद्यपि यस औषधिको दक्षता वैज्ञानिकहरु र अनुसन्धानकर्ताहरु र ठूलो वैज्ञानिकहरु बीचको झगडाको रुपमा रहेको छ। उदाहरण को लागी, वहाँ anecdotes भएको छ कि SR9009 मौखिक जैव उपलब्धता शून्य छ। ठिक छ, म शैतानको वकिललाई कार्य गर्न चाहन्न, तर ten%% स्टेनाबोलिक प्रयोगकर्ताहरूले यसको प्रभावकारिता पुष्टि गर्दछन्। यसका साथै तपाईले प्रश्न गर्नु पर्ने हुन्छ कि एन्टि-डोपिंग संगठनहरू किन एथलेटिक्समा यसको प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउन नर्भ हुन सक्छ जब पदार्थ अक्षम छ?
नोट गर्नुहोस् कि SR9009 परिणामहरू स्पट-अनमा छन् जब तपाईं स्वस्थ आहार गर्दा नियमित रूपमा कार्य गर्नुहुन्छ। बोसोयुक्त खाना, क्यालोरीबाट बच्नुहोस्, र धुम्रपान र पिउनेबाट टाढा राख्नुहोस्।
चो, एच।, झाओ, एक्स। एट अल। (2012) REV-ERBα र REV-ERBβ द्वारा सर्काडेन व्यवहार र मेटाबोलिजमको नियमन। जीन अभिव्यक्ति प्रयोगशाला, जैविक अध्ययन को लागी सालक संस्थान.
मोरियोका, एन, झा Z, एफएफ, तोमोरी, एम।, हिसोका-नाकाशिमा, के।, साकी, एम, र नाकाता, वाई (एक्सएनयूएमएक्स)। आणविक रिसेप्टरको उत्तेजना REV-ERBs C2016 खगोल कोशिकाहरूमा प्रो-इन्फ्लेमेटरी अणुहरूको ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर-प्रेरित अभिव्यक्ति को नियमन गर्दछ।
थाम्स, पीजी, ब्रान्डन-वार्नर, ई।, एट अल। (2016) Rev-Erb Agonist र TGF-β त्यस्तै Autoophagy लाई असर गर्छ तर हेपेटिक स्टेलाट सेल Fibrogenic फेनोटाइप फरक पार्छ। इंट जे बायोकेम सेल बायोल.
डडसन, बी (2013)। नयाँ औषधि नक्कल व्यायाम को लाभदायक प्रभावहरु। स्वास्थ्य र कल्याण.
Woldt, E., Sebti, Y. Et al। (2013) रेव-एर्बले माइटोकन्ड्रियल बायोजेनेसिस र अटोफेगी रेगुलेटिंग गरेर स्केलेटल स्नायु ऑक्सीडेटिव क्षमता परिमार्जन गर्दछ। प्राकृतिक चिकित्सा जर्नल.
सुल्ली, जी।, रोमेल, ए, एट अल। (2018) REV-ERBs को औषधीय सक्रियता क्यान्सरमा घातक छ र ओन्कोजिन-प्रेरित सेन्ससेन्स। प्रकृति (विज्ञानको आन्तरिक पत्रिका).
कसरी Trenbololone रेसिपी Trenbolone Enanthet पाउडर मिक्स गर्न को उपयोग गर्न
एनाबोलिक स्टेरोइड संसारमा सामान्यतया गलत धारणा	Oxandrolone (Anavar) को बारेमा सबै कुरा, तपाईंले थाहा पाउनु आवश्यक छ